Markii ay yaraadeen dadkii ka codsanayey magangelyodoonimada Iswiidhan waxa yaraaday magaalooyinkii codsiyada laga samayn jirey - Migrationsverket
Markii ay yaraadeen dadkii ka codsanayey
magangelyodoonimada Iswiidhan waxa yaraaday magaalooyinkii codsiyada laga
Minskat antal ansökningsorter när färre människor söker asyl i Sverige - somaliska
Laga bilaabo 1 bisha febraayo qofka raba inuu codsi magangelyodoonimo ka dalbado wadanka Iswiidhan haddii ay tahay markii ugu horeysey ee uu qofkaasi codsiga dalbanayo waa inuu yimaado qaybta laga codsado ee Stockholm, Göteborg ama Malmö.
Maanta dad yar ayaa codsiga magangelyodoonimo ka samaynaya wadanka Iswiidhan, markaa qaar badan ayaa maanta durbaba codsigoodii magangelyodoonimada ahaa geystey gobolada waaweyn ee Stockholm, Göteborg ama Malmö. Hey’adda laanta socdaalku waxay rabtaa inay nidaamka codsiyada araajida ay dib u habeeyaan ku sameeyaan iskuna shaandhaynaya iyadoo codsiyada
magangelyodoonimada ku qabanaysa sadexda magaalo oo keliya.
Carruurta aan qaan gaarin ee aanu waalidkood la socon waxay tegikaraan magaalooyin badan oo ay ku taalo Hey’adda laanta socdaalku si codsigooda magangelyodoonimada loo diiwaangeliyo. Waxay kaloo arrintaasi khuseysaa qofka raba inuu dheeraysto sharcigiisa deggenaanshaha haddii uu yahay
qof magangelyodoon ah.
Qofka waalidka ah ee magangelyodoonka ah ee rabo inuu diiwaangeliyo ilmo cusub oo u dhashay wuxuu la xiriirayaa qaybta isaga qaabilsan.
Raadi cinwaanka Hey’adda laanta socdaalka